Kaambaynka Murashixiinta, Kala Safashada Marwooyinka, Liisaska Saylici Iyo Muuse Biixi | Ogaalnews
Kaambaynka Murashixiinta, Kala Safashada Marwooyinka, Liisaska Saylici Iyo Muuse Biixi
October 26, 2015 | Published by: Khadar Jaamac Dirir (Jacayl)
Cugashada Marwada Madaxweynaha Iyo Wiilka ay Sodohda u tahay, waxtar iyo waxyeelo waa u midkee Muuse Biixi?
Hargeysa (Ogaal) Shabakadaha wararka internetka qaarkood ayaa faafiyay liiska magacyadda 23 xubnood oo ka mid ah liiska golaha dhexe ee Kulmiye, oo ah tiro gaar ah oo uu soo magacaabay gudoomiye Muuse Biixi , halka madaxweynuhuna uu ka soo magacaabay 10 xubnood, madaxweyne xigeenkuna ka soo magacaabay 6 xubnood.
Liiska magacyadda 23 xubnood ee Gudoomiyaha Kulmiye gaarka u lahaa ee uu soo magacaabay si ay uga mid noqdaan xubnaha coddaynaya waxa ugu horeeya Marwadda Madaxweynaha Marwo Aamina Weris Xaaji Maxamed Jirde. Waxa kale oo ka mid ah liiska wiilka ay sodohda u tahay ee Baashe Cawil Xaaji Cumar oo haatan ku magacaaban wakiilka Somaliland ee dalka Imaaraadka Carabta. Haddii liiskan shabakaduhu faafiyeen sidaa sax ku yahay oo uu run yahay, waxa cad in marwadda Madaxweyne Siilaanyo ay toos ula safantay murashax Muuse Biixi Cabdi oo ah gudoomiyaha xisbiga. Waxa kale oo falanqeeyayaasha siyaasadu ku tilmaameen, inay calaamad u tahay in Marwo Aamina Weris ay dananayso inay ku sii jirto saaxadda siyaasadda odaygeedda kadib. Sidoo kale wiilka ay sodohda u tahay ayaa isna isla sidaa loo arkaa, isla markaana aragtida dad badan oo isha ku haya mawduucan ayaa hilaadintooda durugsani rumaysan tahay, in yoolku gaadhsiisan yahay ilaa gudoomiyaha bedeli doonna gudoomiyaha xisbiga ee hadda. Sida la malayn karo Gud. Muuse Biixi qaadashada labadan xubnood wuxuu u eexaystay inay wax uga tari karraan doorashada, isla markaana ay guushiisu ku xidhan tahay iyaga. Hase yeeshee taa bedelkeeda waxa loo arkaa in aanuu si wayn uga fekerin wuxuu ku waayi karo, marka loo eeggo dhaliilaha xad dhaafka ah ee loo tiriyo qoyska madaxtooyada. Laga yaabaa in qaar la socday kaga leexdaan, waayo, way dhaaftay saacadii habrashada. Sidoo kale, waa laga yaabaa in qaar ka horjeeday ku raacaan dartood, balse waxay u eg tahay in aan isbarbar dhiga labadan waqti badan lagu luminin.
Taas ka sokow, nidaam kastaa marka cimrigiisu dhamaado, wuxuu saamayn ku yeeshaa waxa soo socda, isla markaana wuxuu kaalmeeyaa oo uu wax la gala, cid uu hadhow ku baxsan karo oo aan daba qaadin khaladaadkii ay galeen intay taladda hayeen. Badannaa talisyadda Afrikaanka aqlabiyaddoodu waxay weli ka siman yihiin lunsiga hantida umadda iyo ku tagri falka awoodda. Waxay ku xoollaystaaan kursiga, Sida daraadeed, markay meesha ka tegayaan ma jecla inay iyaga bedesho cid daba qaada wixii ay sameeyeen, si ay taa uga badbaadaanna waxay ku sii tiirsadaan cid ay heshiis la galeen oo ay sii taageeraan intaanay kursiga ka kicin, si ay hadhow xijaab ugu noqdaan.
Sabab kastaaba ha kaliftee, la yaab maaha in rajiimka tegayaa badhi taaro mid ka mid ah dadka u darban inay bedelaan. Hogaamiye kasta oo aan kursiga ku soo laabanaynina, waa khasab inuu raggiisa mid taageero, isla markaana looma arko sheeko gadmaysa dhex baan ahay, tannaana muujinaysa . iyadoo madaxweynaha waayeelka ahi hore u sheegay in si xor ah loogu tartamayo xisbiga dhexdiisa, taana loo fasirtay inuu dhex u yahay murashixiinta, isla markaana afhayeenkiisu warkii u dambeeyay ee uu soo saaray ku beeniyay war sheegayay inuu taageero u muujiyay mid ka mid ah murashixiinta, misana liiskani wuxuu iftiiminayaa wax ka soo hor jeeda taa. sidaa aawadeed, laba mid uun weeye, in qoyska madaxtooyadu ku kala qaybsan yahay aragtida iyo in hoosta layska og yahay oo ay dhinac wax u wada waddaan. Si kastaba haloo dhigee taa macneheedu maaha waxa guulaysanaya cidda madaxtooyadu taageerayso, sababtoo ah labada dhanba way u dhici kartaa, way guulaysan karaan, waana laga guulaysan karraa.
Dhanka kale waxa su,aali ka taagan tahay, mar haddii marwadda madaxweynuhu taageertay Muuse Biixi, miyay ku raacsantay Wasiirka Maaliyadda Marwo Samsam mise waa saaxiibo kala jeestay?. Ma sugna jawaabta rasmiga ahi weli, balse xoggo laga helayo illo ka mid ah dhanka Muuse Biixi waxay tibaaxeen, in Marwo Samsam ay u dhaqaaqday dhanka Maxamed Biixi. Dhan ay u dhacdaba dhawrista xaqiiqda tibaaxahani ma durugsana. Liiska magacyadda 23 ka xubnood ah oo ay faafiyeen shabakadaha Caynabanews, Sagalnews iyo qaar kale ee ay sheegeen in Muuse Biixi magacaabay waxay u dhigan yihiin sidan;
1- Aaminna Xaaji Maxamed Jirde
2- Canab Cumar Ileeye
3- Cali Sheekh Yoonis
4- Xasan Mawliid
5- Xuseen Maxamed Rodol
6- Aaminna Yuusuf Aar (Timo dheer)
7- Axmed Yuusuf Dirir
8- Samsam galbeedi
9- Hodan Axmed Cabdillaahi
10- Maxamuud Saalax Cabdi
11- . Faadumo Yuusuf Qodax l
12- Aniisa Nuur Cigaal
13- Cabdi Giire
14- Khaliif Maxamed Warsame
15- Maxamed Yuusuf Siciid
16- Aamina Xaji Axmed Miisan
17- Dalays Shire Faarax
18- Baashe Cawil Xaji Cumar
19- Xasan Faarax Jagac
20- Gen: Xasan Sallin
21- Guuleed Jaamac Ducaale
22- C/qani Aadan Cadde
23- Cumar Dixood
Liiska Madaxweyne Xigeenka
!.Cismaan Barkhad Xirsi
Abiib Xasan Filfil
3.Cabdirashiid Axmed Guulleed
4.Ibraahim Xasan Axmed
Xasan Qaalib Kaamil
Axmed Cali Maxamuud